Okwu Agro Code. Nzukọ nke abụọ na-anọghị n'ịntanetị - akwụkwọ akụkọ "Sistemụ nduku"
Isi News Ọkwa
Okwu Agro Code. Nzukọ nke abụọ na-anọghị n'ịntanetị
в Ọkwa, News, Injinia / Teknụzụ
A na-eche ugbu a na ahịa drones ugbo na ijeri $ 32,4, ọnụ ọgụgụ ngwaọrụ maka ọrụ ugbo na mbara igwe ga-eto ruo 2029 puku site na 790, na olu ahịa teknụzụ ọrụ ugbo zuru ụwa ọnụ site na 2025 nwere ike iru ijeri $ 3,1. teknụzụ na Russian. Federation bụ naanị 1,5% nke ụwa. Nke a na-ekwu maka nnukwu ikike nke ntụziaka ahụ. Ọrụ ugbo nke ọma, AI, drones na sistemu satịlaịtị, ịntanetị nke ihe - ihe teknụzụ na-achọ n'ahịa taa na otu ha ga-esi etolite echi, anyị ga-atụle na nzukọ.
Mee 31 na elekere 17:30 ga-eme Nzukọ AgroCode na-anọghị n'ịntanetị nke abụọ
- ọrụ ugbo ziri ezi na usoro ahịa AgroTech ndị ọzọ;
- teknụzụ satịlaịtị: ka eserese ga-esi etolite na 2023;
- ugbo elu ugbo: ka drones si enyere aka zụlite ugbo "mara ihe";
- ike maka mmejuputa ihe ntanetị nke ihe (IoT) na ọrụ ugbo Russia;
- Nnukwu data na ọgụgụ isi: ka nyocha ga-esi weta ngalaba ọrụ ugbo n'ọkwa ọhụrụ;
N'etiti ndị ọkà okwu bụ ndị nnọchiteanya nke: Rosselkhozbank, Green Growth, Lazarevskoye farm, ExactFarming.
Nzukọ a ga-eme na Moscow. Ntinye aka bụ n'efu.
Mmemme zuru ezu na ndebanye aha na njikọ: https://agro-code.ru/meetup/talk2/
Tags: oru ugbo "ama ihe".Mkparịta ụka AgroCode
US nduku na mbupụ nduku na US
Ugbo nke mpaghara Tomsk malitere ịgha akwụkwọ nri na poteto